Shiinaha Pigment Printing Agent Synergistic LH-3912 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Yiman Lanhua
Kala firdhi Daabacaadda
Midabaynta Iyo Dhamaystirka
daawaynta ka hor
daawaynta ka dib
Wakiilka Daabacaadda Midabka LH-3912
LH-3912 waxa ay si cad u wanaajin kartaa xawliga xoqidda qalalan iyo qoyan iyo dhaqsaha dhaqidda.
Wakiilka Daabacaadda MidabkaLH-3912
-LH-3912 waxay si cad u wanaajin kartaa xawliga xoqidda qalalan iyo qoyan iyo dhaqidda dhaqsaha.Looma isticmaali karo oo kaliya sidii wax lagu daro koollada daabacaadda midabaynta, laakiin waxa loo isticmaali karaa habka daawaynta suufka- engegan si loo hagaajiyo xawliga dharka.
Astaamaha Muhiimka ah iyo Faa'iidooyinka Caadiga ah:
Loo isticmaalo koollada daabacaadda midabka leh oo leh saameyn isku dhafan.
Waxay hagaajin kartaa hantida filim samaynta iyo xoqidda xawliga.
Waxay hagaajin kartaa caabbinta dhaqidda ee dharka daabacan si ay waxqabadku u waarto.
Wax saameyn ah kuma laha maaraynta dharka.
Alaabada saaxiibtinimo ee deegaanka, oo ka madax banaan formaldehyde.
Way fududahay in lagu qaso biyo qabow, oo aan lahayn dareereyaal.
Foomka Jirka dareere
Muuqashada Dareere cawl bunni ah
Waxyaabo adag (%) 24.0-27.0
pH (25 ℃) oo biyo ah 3.0-6.0
Sifada Ionic cationic/Nonionic daciif ah
1. Cunto karinta:
Wakiilka dhumucda midabka 1.5-2.5% x%
2. Socodka geedi socodka: Diyaarinta koollada - daabacaadda shaashadda Rotary ama fidsan-qallajinta (140 ℃) - Dubo (150-160 ℃ × 1.5-2 min)
3. Habka suufka-qallalan-cure habka loo kariyo: Binder 0.5-2%, LH-3912 1-2% Fiiro gaar ah: Habka tafatirka waa in lagu hagaajiyaa isku dayada hordhaca ah.
Tilmaamaha hawlgalka iyo badbaadada:
1. Soo jeedi in la miisaamo oo lagu qaso wakiilada siday u kala horreeyaan marka la diyaarinayo koollada, dabadeed mid mid ku dar oo si buuxda u walaaq.
2. Si adag ugu talin in la isticmaalo biyo jilicsan oo lagu qasi karo, haddii biyo jilicsan aan la helin, xasiloonida ayaa loo baahan yahay in la tijaabiyo ka hor inta aan la samayn xalka.
3. Ka dib marka la qaso, waa inaan lagu kaydin waqti dheer.
4. Si loo hubiyo badbaadada, waa inaad dib u eegtaa xaashiyada xogta badbaadada agabka ka hor inta aanad alaabtan ku hoos isticmaalin shuruudo gaar ah.MSDS waxa laga heli karaa Lanhua.Kahor intaadan la tacaalin alaabada kale ee lagu xusay qoraalka, waa inaad heshaa macluumaadka badbaadada alaabta oo aad qaaddo tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad u hubiso badbaadada isticmaalka.
Shabagga durbaanka caaga ah 50 kg, waxaa lagu kaydin karaa 6 bilood heerkulka qolka iyo xaalad hermetic iyada oo aan la helin iftiinka qorraxda.Si loo hubiyo in tayada badeecada la ilaaliyo, fadlan hubi muddada uu shaqaynayo badeecada, waana in la isticmaalo kahor ansaxnimada.Weelka waa in si adag loo xiraa marka aan la isticmaalin.Waa in la kaydiyaa iyada oo aan la kulmin kuleyl aad u daran iyo xaaladaha qabowga, taas oo keeni karta kala soocida alaabta.Haddii alaabtu kala go'do, walaaq waxa ku jira.Haddii alaabtu barafaysan tahay, ku dhalaali xaalad diiran oo walaaq ka dib dhalaalidda.
Talooyinka kor ku xusan waxay ku salaysan yihiin daraasado dhammaystiran oo lagu sameeyay dhammaystirka dhabta ah.Si kastaba ha ahaatee, waa bilaa mas'uuliyad ku saabsan xuquuqda lahaanshaha ee dhinacyada saddexaad iyo sharciyada shisheeye.Isticmaaluhu waa inuu tijaabiyaa in alaabta iyo Codsiga: ay ku habboon yihiin ujeedooyinkiisa gaarka ah.
Annagu, wax kasta oo ka sarreeya, mas'uul kama nihin beeraha iyo hababka Codsiga: kuwaas oo aynaan qoraal ahaan u dejin.
Talooyinka calaamadaynta xeerarka iyo tallaabooyinka ilaalinta ayaa laga qaadan karaa
xaashida xogta badbaadada ee kala duwan.
Hore: Isha warshadda saabuunta -Hydroperoxide Stabilizer LH-P1510 - Yiman Lanhua
Xiga: Dhibicda Waxtarka Sare ee Penetrant LH-P1320
Wakiilka Kala firdhinta ee Pigments
Wakiilka Daabacaadda Midabka
Dhumucda Polymer Acrylate LH-20
Dhuxusha Deegaanka Saaxiibtinimada Leh LH-312D
Akrilik Polymer oo ku jira Foomka Koowaad/Paste Cad LH...
Wakiilka Daabacaadda Midabka LH-3211
Dhuxusha Dahaarka Dharka Dhuxusha LH-313E
Dahaarka Daabacaadda Dhumucda Reagent LH-312F
Alaabooyinka Kulul - Khariidadda goobta - AMP Mobile
Wakiilka Saabuunta Acrylic, Midabka Heerkulka Sare, Dhuxusha Kala firdhisan-La'aanta, Shaadhka Laastikada ah Khad Xariir Cad ah, Kaaliyeyaasha Kiimikada, Dheejinta Xakamaynta,